December 2018 – Page 59 – Swel Sone News – NEW VPS
ဖွေးဖွေးနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံဟောင်းတွေကို ဆက်တိုက်တင်ရင်းနဲ့ ပရိသတ်တွေကို မေးခွန်းတွေ ထုတ်ခဲ့တဲ့ စိုင်းစိုင်းက ပရိသတ်တွေ သိချင်နေတဲ့ အကြောင်းအရာကို ဒီနေ့(ဒီဇင်ဘာ၁ရက်)မှာ ပြောပြလိုက်ပါပြီ။ စိုင်းစိုင်းဟာ ဖွေးဖွေးနဲ့ အတူရိုက်ထားတဲ့ ပုံအဟောင်းတွေကို အခုရက်ပိုင်း သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေ့ခ်ျမှာ ဆက်တိုက်တင်ခဲ့ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံတင် ရင်းနဲ့လည်း ပရိသတ်တွေကို မေးခွန်းတွေ ထုတ်ပြီး ခေါင်းစားခဲ့တာပါ။ ပရိသတ်တွေကို မေးထားတဲ့ မေးခွန်းတွေကိုတော့ စိုင်းစိုင်းက ချက်ချင်းမဖြေဘဲ ဒီဇင်ဘာ(၁) ရက်နေ့မှ ဖြေမယ်ဆိုပြီး ပရိသတ်တွေကို ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ပရိသတ်တွေ သိချင်နေတဲ့ အကြောင်းအရာကို စိုင်းစိုင်းက ပြောပြလိုက်ပါပြီ။ အဲ့ဒါက စိုင်းစိုင်းနဲ့ ဖွေးဖွေးတို့ အတူ သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ” ရည်းစားတစ်ဝမ်းကွဲ” ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်မကြာခင် ရုံတင်တော့မယ် ဆိုတာ ဖြစ်ပါ တယ်။ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်နဲ့ ဖွေးဖွေးတို့ရဲ့ အချစ်ကားဖြစ်တဲ့ “ရည်းစားတစ်ဝမ်းကွဲ”...
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Liamလေးကို ထိန်းရင်း ချစ်မဝဖြစ်နေတဲ့ တီတီ စိုးမြတ်နန္ဒာ
မင်းသမီးလေး ယွန်းဝတီလွင်မိုးရဲ့ သားလေးဖြစ်တဲ့ Liam လေးကတော့ အားလုံးကချစ်ရတဲ့ ကလေးလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လပြည့်ဝန်းလေးလို မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းလေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Liam လေးက မြင်သူတိုင်းချစ်မိစေလောက်တဲ့အထိ လူချစ်လူခင် ပေါများသူလေး ဖြစ်ပါတယ် ။ Liam လေးက ဘိုးဘိုးလွင်မိုးနဲ့ တစ်ထေရာတည်းတူတာကြောင့် ဘိုးဘိုး၊ဘွားဘွားတွေအပြင် အားလုံးက ဝိုင်းချစ်နေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ယွန်းတို့မိသားစုလေးက လက်ရှိမှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လာခဲ့ပြီး မိဘတွေနဲ့အတူ စုံစုံလင်လင်နေထိုင်ရင်း ပျော်ရွှင်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ အသက် (၃) လပြည့်ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ Liam လေးက အရမ်းသွက်လက်သလို လူတတ်လေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Liam လေးတို့အိမ်ကို အနုပညာရှင်တွေ မကြာခဏအလည်လာပြီး တွေ့ဆုံကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလည်း မင်းသမီးချော စိုးမြတ်နန္ဒာက ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Liam လေးနဲ့ကို သွားတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဒါက သူမရဲ့ Instagram...
ပရိသတ်တွေရဲ့ အိုင်ဒေါမိသားစုလို့ဆိုရမယ့် လင်းလင်းတို့မိသားစုလေးဟာ လေးစားအားကျအတုယူစရာကောင်းလွန်းလှပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကို မိခင်နဲ့ ဖခင်တို့ရဲ့အုပ်ထိန်းမှုပုံစံလေးတွေနဲ့အတူ ပြောပြလေ့ရှိပြီး အတုယူစရာကောင်းလှတဲ့ သွန်သင်ဆုံးမမှုလေးတွေကိုလည်း ရရှိနေကြတာပါ။ ဘာသာမတူညီကြပေမယ့် တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးလေးစားစရာကောင်းလှတဲ့ နားလည်မှုတွေနဲ့ ယုံကြည်ရာကိုကိုးကွယ်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်နေ့ Sweet December လေးမှာတော့ ချစ်သုဝေတို့မိသားစုလေးက ခရစ္စမတ်အတွက်ပြင်ဆင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်သုဝေကတော့ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သမီးလေးတွေကိုလည်း တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ဘုရားကျောင်းခေါ်သွားတက်ခိုင်းသူပါ။ ယနေ့မှာ လင်းလင်းကတော့ ခရစ္စမတ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရင်း လောကမှာ လူပီသဖို့ လုပ်ဆောင်ရမယ့်အကြောင်းအရာကိုပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ” လောကကြီးမှာ လူဆိုတဲ့ သတ္တဝါတွေဟာ လူပီသဖို့အတွက် မဖြစ်မနေအရင်ဆုံးလုပ်ဆောင်ရတာဟာ ကိုယ်ရဲ့မိသားစုကို ကိုယ်ချစ်မြတ်နိုးဖို့ပါဘဲ ကျနော့်ရဲ့မိသားစု ထရီဇာ့မိသားစု နဲ့ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်မိသားစု လေးတွေကို ကျနော်တန်ဖိုးထား ချစ်နေနိုင်တဲ့အရသာဟာ ကျနော့်ဘဝမှာ အချိုမြိန်ဆုံးပါဘဲ လူသတ္တဝါတွေနေထိုင်တဲ့ ကမ္ဘာပေါ်က မိသားစုတိုင်း ကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရင်း ကျနော်တို့မိသားစုရဲ့ ဆွိဒီဇင်ဘာနဲ့ ခရစ်စမတ်...
တောင်ဇလပ်ပန်းလေးတွေပွင့်တဲ့အေးချမ်းတဲ့နေရာလေးကို အလည်ရောက်နေတဲ့ စိုးပြည့်သဇင်ရဲ့ ချစ်စရာပုံရိပ်လေးတွေ
အနုပညာအသိုင်းဝိုင်းကြီးက ဆင်းသက်လာသူလေး စိုးပြည့်သဇင်ကတော့ အနုပညာနဲ့ပတ်သတ်ရင်ပါင်းစုံမှာ ထူးချွန်လှတဲ့သူလေးလို့ဆိုရပါမယ်။သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာလည်း ပရိသတ်တွေအားလုံးသိတဲ့ အနုပညာစွမ်းရည်တွေနဲ့ ပြည့်ဝသူလေးဖြစ်သလို အဆိုဂီတဘက်မှာလည်းသူမတူတဲ့စွမ်းရည်မျိုးတွေနဲ့ သီဆိုနိုင်သူတစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။အေးချမ်းတည်ငြိမ်လှတဲ့ အပြုံးလေးတွေနဲ့ အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ သူမရဲ့ မျက်နှာလေးကြောင့် ပရိသတ်တွေအားလုံးအချစ်ပိုနေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသမီးချောလေး စိုးပြည့်သဇင်ကတော့ အနုပညာလောကမှာ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်ဝန်းရံမှုတွေကို အပြည့်အဝအခိုင်အမာရရှိထားသလို သူမရဲ့ ပီပြင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့်လည်း အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆုကိုလည်း ဆွတ်ခူးပိုင်ဆိုင်ထားတာပါ..။ ဒီနေ့မှာတော့ မှာတော့ စိုးပြည့်သဇင်က” တောင်ဇလပ်ပန်းလေးတွေပွင့်တဲ့အေးချမ်းတဲ့နေရာလေး…..ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ချင်းလူမျိုးလေးတွေရှိတဲ့နေရာ…❤️”ဆိုပြီး ချင်းပြည်နယ်ကို အလည်ရောက်နေတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုတင်ခဲ့ပါတယ်။ချစ်ပရိသတ်ကြီးအချစ် စိုးပြည့်ရဲ့ ချင်းပြည်နယ်ရောက်အမှတ်တရ အလှပုံရိပ်လေးတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Photo Source : Soe Pyae Thazin
“လည်လည် သွားမယ် ဘယ်သူလိုက် မလဲ” လို့မေးလိုက်တဲ့ ခေးလေး ခင်ဝင့်ဝါ ရဲ့ ချစ်စရာပုံရိပ်လေးတွေ
မင်းသမီးချောလေး ခင်ဝင့်ဝါကတော့ လှပတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ ပရိသတ်အသည်းကို ဖမ်းစားထားသူလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ကားပေါင်းများစွာကို ရိုက်ကူးထားပြီး လက်ရှိမှာလည်း ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေကို ဆက်တိုက်ရိုက်ကူးနေရတာ တွေ့ရပါတယ်။ အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ အပြုံးလှလှလေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သူမက အခုမှာ ပရိသတ်တွေကိုအချစ်ကိုရရှိနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ အပြုံးချိူချိူလေးတွေရယ် ချစ်စရာဟန်ပန်လေးတွေရယ်နဲ့ အမြဲတမ်း သရုပ်ဆောင်တက်တာကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေက အသဲစွဲနေရခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခေးကတော့ သူရဲ့ လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေနဲ့ အနုပညာပုံရိပ်လေးတွေကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်တွင် ဖော်ပြလေ့ရှိတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ခေးလေး ခင်ဝင့်ဝါက “လည်လည် သွားမယ် ဘယ်သူလိုက် မလဲ 💕💕 ” ဆိုပြီး ဆိုင်ကယ်စီးနေတဲ့ ချစ်စရာပုံလေးတွေတင်ထားပါတယ်။ ချစ်ပရိသတ်ကြီးအတွက် ခေးလေးခင်ဝင့်ဝါရဲ့ ချစ်စရာပုံရိပ်လေးတွေကို ဖော်ပြေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Photo Source : Khin Wint Wah
ဆန်းပြားတဲ့ဖက်ရှင်လေးနဲ့ ပွဲတက်လာခဲ့တဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် သက်မွန်မြင့်
ပရိသတ်အချစ်တော်သက်မွန်မြင့်ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော်သရုပ်ဆောင်ဖြစ်သလို အောင်မြင်မှုသရဖူတွေကိုလဲ ရယူထားနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ အိုက်တင်အမျိုးမျိူး ဇာတ်ရုပ်အမျိုးမျိူးကိင ပိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်စွာသရုပ်ဆောင်ထားနိုင်တာကြောင့် အကယ်ဒမီတွေရရှိသည်အထိ အောင်မြင်နေတဲ့ စွယ်စုံရအနပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ သက်မွန်မြင့်က “Beauty City” ရဲ့ ပထမဆုံး ဆိုင်ခွဲဖြစ်တဲ့ “Beauty City ပါရမီ” ဆိုင်ခွဲ ဖွင့်လှစ်ခြင်း အခမ်းအနားကို ဆန်ပြားတဲ့ဖက်ရှင်ပုံစံလေးနဲ့ တက်ယောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ချစ်သက်ရဲ့ စွန်းလန်းနေတဲ့ ပုံလေးတွေက ပရိသတ်တွေ အမြင်တစ်မျိူးဆန်းစေပြီး အချစ်ပိုစေခဲ့ပါတယ်။ ချစ်သက်ကတော့ ယခုမှာကြော်ငြာတွေလဲ ရိုက်ကူးနေသလို ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေလဲ ရိုက်ကူးနေသူဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် ချစ်သက်ရဲ့ ဖက်ရှင်အလန်းနဲ့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ပုံလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ Photo Source : myanmar Celebrity
ဒုံးပျံစီးရီးနဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးကပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ထဲကိုရောက်လာတဲ့ အဆိုတော်လွှမ်းပိုင်ဟာ အခုဆိုရင် ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေရိုက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်နေပါပြီ။ လွှမ်းပိုင်ဟာ သရုပ်ဆောင်ရာမှာလည်းထူးချွန်ပြီး အသက်ဝင်တာကြောင့် မင်းသားတစ်ယောက်အဖြစ်ပရိသတ်လက်ခံအားပေးမှုကိုရနေတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ လွှမ်းပိုင်က Bobby Soxer နဲ့ချစ်သူသက်တမ်း ကိုးနှစ်ကျော်လာပြီဖြစ်ပြီးအချိန်တွေအကြာကြီးခိုင်မြဲနေတဲ့အချစ်ရေးရဲ့ လျို့ဝှက်ချက်ကိုပြောပြပေးသွားပါတယ်။ လွှမ်းပိုင်က သူ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ကိုယ်စောင့်နတ်ဇာတ်ကားကြီးရုံတင်တော့မှာမို့ စိတ်တွေလှုပ်ရှားမိနေကြောင်းကို “ရင်ထဲမှာစိတ်လည်းလှုပ်ရှားတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ဆို ဒီကားက ကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့သမျှဇာတ်ကားတွေထဲမှာအများဆုံးပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ရတဲ့ ဇာတ်ကားဆိုတော့လေ.. Producing ပိုင်းရော Acting ပိုင်းရော ကျွန်တော်ပါတယ်ဆိုတော့ စိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်”လို့ ပြောပြထားပါတယ်။ အခုတလော ရုပ်ရှင်တွေများများရိုက်ဖြစ်နေကြောင်းကိုလည်း “ဒါကတော့ တိုက်ဆိုင်သွားတာလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ ရိုက်ထားတာတော်တော်များများက ကျွန်တော်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်လောက်က ရိုက်ထားတာတွေများတယ်လေ။ ကျွန်တော်အဲဒီတုန်းက ကားရိုက်တွေဆက်ထားတာတွေက အခု ပြန်ထွက်လာတော့ ဆက်သွားတာပေါ့နော်”လို့ ဖြေကြားထားပါတယ်။ လွှမ်းပိုင်က အဆိုပိုင်းကိုလည်း မျက်ခြေပျက်မခံပဲ ကြိုးစားနေကြောင်းကို “ကျွန်တော်အဆိုပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ဒီလမဟုတ်ဘူး။ရှေ့လမှာပေ့ါနော် သီချင်းအသစ်တွေတော့ထွက်ဖို့ရှိပါတယ်”လို့ ပြောထားသလို နှစ်တွေအကြာကြီး ချစ်လာတဲ့ အချစ်ရေးရဲ့လျို့ဝှက်ချက်ကိုလည်း “နားလည်မှုဆိုတာကတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ညှိယူရတဲ့အခါတွေလည်းရှိတယ်။...
ခင်​ပွန်းဖြစ်​သူရဲ့​မွေး​နေ့အလှူကိုကြည့်​ပြီး ပီတိဖြစ်​ရတယ်​ဆိုတဲ့ အိန္ဒြာ​ကျော်​ဇင်
ပရိသတ်​​တွေချစ်​ကြတဲ့ အနုပညာရှင်​စုံတွဲဖြစ်​တဲ့ ​ပြေတီဦးနဲ့ အိန္ဒြာ​ကျော်​ဇင်​ဟာ အနုပညာ​လောကမှာ​တော့ အသီးသီး​အောင်​မြင်​မှု​တွေ သိမ်းပိုက်​ထားနိုင်​တဲ့သူနှစ်​ဦးပါပဲ။ သူတို့နှစ်​​ယောက်​တွဲပြီး ​သရုပ်​​ဆောင်​ခဲ့တဲ့ ရုပ်​ရှင်​ဇာတ်​လမ်း​တွေ​ရော၊ တစ်​​ယောက်​ချင်းစီ လုပ်​ကိုင်​ခဲ့တဲ့ အနုပညာလုပ်​ငန်း​တွေတိုင်းဟာလဲ ​အောင်​မြင်​မှု​တွေတစ်​ခဲနက်​ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ သရုပ်​​ဆောင်​တဲ့​နေရာမှာ သမ္ဘာကျလွန်းတဲ့ ​ပြေတီဦးနဲ့ အိန္ဒြာ​ကျော်​ဇင်​ဟာ အကယ်​ဒမီဆုကြီးများစွာကိုလဲ ကိုယ်​စီကိုယ်​စီပိုင်​ဆိုင်​ထားနိုင်​သူနှစ်​ဦးပါပဲ။ ပရိသတ်​​တွေကလဲ သူတို့နှစ်​ဦးကို ဆယ်​စုနှစ်​တစ်​စုစာ အား​ပေးလာ​ခဲ့တာ ယခုအချိန်​ထိလဲ အချစ်​မ​လျော့ပဲ အား​ပေး​နေကြဆဲပါပဲ။ ​ပြေတီဦးနဲ့ အိန္ဒြာ​ကျော်​ဇင်​ဟာ လက်​ရှိမှာလဲ အနုပညာလုပ်​ငန်း​တွေကို အားသွန်​ခွန်​စိုက်​ လုပ်​ကိုင်​​နေကြပါတယ်​။ ​ပြေတီဦးနဲ့ အိန္ဒြာ​ကျော်​ဇင်​တို့ ဇနီး​မောင်​နှံဟာ အနုပညာလုပ်​ငန်း​တွေအပြင်​ ပရဟိတလုပ်​ငန်း​တွေကိုပါ လုပ်​ကိုင်​​နေလျက်​ရှိပါတယ်​။ ​ပြေတီဦးရဲ့ ပညာ​ရေး​ဖောင်​​ဒေးရှင်းက​နေ ပညာသင်​ဖို့အခက်​အခဲဖြစ်​​နေတဲ့ ​ကျောင်းသား၊ ​ကျောင်းသူ​တွေကို ပညာသင်​ကြားဖို့ ​ထောက်​ပံ့​ပေး​နေတာပဲဖြစ်​ပါတယ်​။ ​ပြေတီဦးရဲ့ ပညာ​ရေး​ဖောင်​​ဒေးရှင်း​လေးက တည်​​ထောင်​ထားခဲ့တဲ့ (၁၀)နှစ်​နီးပါးရှိ​နေပြီဖြစ်​ပြီး ​ကျောင်းသား၊ ​ကျောင်းသူ​ပေါင်း (၆၄) ​ယောက်​ကို ဆရာဝန်​အဖြစ်​​မွေးထုတ်​​ပေးနိုင်​ခဲ့ပါတယ်​။ စိတ်​ထားမွန်​မြတ်​လှပြီး ​ပျော်​​ပျော်​​နေတတ်​တဲ့ ​ပြေတီဦးနဲ့ အိန္ဒြာ​ကျော်​ဇင်​တို့...
နန်းသူဇာရဲ့ မွေးနေ့ အမှတ်တရအနေနဲ့ ချစ်သူ ကျော်ထွဋ်ဆွေက ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းလေး ပြောလာပါ တယ်။ သူတို့ ချစ်သူနှစ်ဦးက အခုဆိုရင် ချစ်သူသက်တမ်း ၈ နှစ်ကြာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ အဆိုတော် နန်းသူဇာရဲ့ မွေးနေ့မှာ သူ့ရဲ့ ချစ်သူဖြစ်တဲ့ ကျော်ထွဋ်ဆွေက အစောဆုံး မွေးနေ့ ဆုတောင်း စကားပြောခဲ့ပါတယ်။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သူတို့ စုံတွဲကလည်း ပရိသတ် အားကျစရာ စုံတွဲလေး တစ်တွဲဖြစ်ပါတယ်။ နန်းသူဇာကတော့ သူမရဲ့မွေးနေ့လေးမှာ ချစ်သူနဲ့အတူ ဘုရားသွားကျောင်းတတ် ကောင်းမှုကုသိုလ်လေးအတူ ပြုလုပ် လှူဒါန်းကုသိုလ်ယူနေတာလည်း တွေ့ရပ်တယ်နော်..။ ”Happy Birthday thae tone layy. အမြဲတမ်း ကျန်းမာ ပျော်ရွှင် ချမ်းသာပါစေ။ sweet december လေး ” ဆိုပြီးတော့ ကျော်ထွဋ်ဆွေရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ...